Imibuzo evame ukubuzwa - Qingdao Junray Intelligent Instrument Co., Ltd.
Siyini isizathu senani lokulawulwa kwekhwalithi enhle yomhloli osebenza kahle wokuhlunga amagciwane we-ZR-1000 engahambelani nebanga elijwayelekile elidingekayo (2200 ± 500 CFU)?
(1) Ukumiswa kwamagciwane akuhlangabezani nezimfuneko zezinga likazwelonke.
(2) Izinga lokugeleza kwepompo ye-peristaltic alilungile, zama ukukhulisa noma ukunciphisa izinga lokugeleza.
(3) Hlola ubukhulu bezitsha ze-petri (Ikakhulu izitsha zengilazi).
Siyini isizathu sokuthi amanye amabhaktheriya akhule ngemuva kwesampuli ngumhloli wokusebenza kahle kwe-ZR-1000 Bacteria filtration?
（1, Ipayipi liyavuza, hlola ukuthi ingabe ipayipi elixhuma abicah engilazini liyavuza yini.
（2） Imvelo ayiyona into enhle uma ulungisa isiko.
Work 3, Indawo yokusebenza inokhahlo noma isihlungi se-HEPA sehluleka.
（4） Hlola usayizi wepetri dish (Ikakhulu izitsha zengilazi).
Ungayilungisa kanjani inkinga yokuthi i-ZR-1000 bacterial filtration ufanisi tester (BFE) ayikwazi ukuqala.
（1） Ngemuva kokucindezela inkinobho yamandla, ilambu elibomvu lamandla alisebenzi, isibani nogesi we-UV nawo awusebenzi, hlola ukuthi ingabe intambo kagesi ixhunyiwe futhi kukhona ugesi, bese uhlola ukuthi inkinobho yokuvikela ukuvuza iyavela yini emuva okokusebenza kuvuliwe.
（2, Amandla akhombisa ukukhanya akhanyisiwe, isibani nokukhanya kwe-UV nakho kuyasebenza kepha isikrini simnyama futhi umshini awukwazi ukuqala, unqamule ukunikezwa kwamandla, uvule futhi futhi ugwaze inkinobho yokusetha kabusha kuphaneli engaphambili.
Inkinga yokufana kwe-A, B izindlela ezimbili u-Anderson sampler ku-ZR-1000 bacterial filtration ufanisi tester (BFE). Umphumela wesampula wendlela engu-A no-B uhlukile.
（1） Hlola ukuthi izinga lokugeleza kuka-A no-B liyahambisana yini.
（2） Bheka ukuthi ipayipi liyavuza yini, bese ubheka ukuthi usayizi wesitsha se-petri uyafaneleka yini (ikakhulukazi isitsha seglasi se-petri, uma isitsha se-petri siphezulu kakhulu, sizokhipha ungqimba olungaphezulu, oluzodala ukuthi isampuli le-Anderson ukuvuza).
（3） Bheka ukuthi ngabe ukuvuleka kwesampuli se-Anderson ngakunye kuvinjiwe (indlela elula yokuhlola, ukubonwa okubukwayo, uma kuvinjiwe, kuyihlanze ngaphambi kokuhlolwa).
Ungabhekana kanjani nokuphambuka kokusebenza kwesihlungi se-ZR-1006 mask particulate filter filter and airflow resistance tester?
Kunconywa ukuthi kusetshenziswe isampula ejwayelekile (njengesampula evivinywa yizinhlangano ezigunyaziwe) noma isihlungi esijwayelekile esinejika lokuhlola ukusebenza kahle kwe-aerosol ukuqhathanisa. Uma kusolwa ukuphambuka, kunconywa ukuthi uye kunhlangano yokulinganisa efanelekayo ukuze ulinganiswe. Insimbi idinga ukunakekelwa ngemuva kwesikhathi sokusebenza, njengokulungiswa kwemoto. Ubungako besondlo ukuhlanza wonke amapayipi angaphakathi nangaphandle, kufakwe ezinye izinto zokuhlunga, izihlungi, nokuhlanza i-generator ye-aerosol, njll.
I-ZR-1006 mask particulate filter performance and airflow resistance tester ayikwazi ukubala isikhathi bese isebenza ngemuva kokuqala kwesampula.
Okokuqala, hlola ukuthi ingabe ukugeleza kwesampula kufinyelelwe kunani lokusetha (njenge-85 L / min), umshini ngeke uqale ukusampula ngaphambi kokuba ukugeleza kufinyelele kunani lokusetha (noma liphezulu kakhulu noma liphansi kakhulu). Iningi lazo lingaxazululwa ngemuva kokufaka esikhundleni ukotini wokuhlunga wemodyuli yabalandeli. Bheka ukuthi ipayipi livaliwe yini, nokuthi i-valve yokukhipha yegumbi lokuxuba kufanele ivulwe ngokujwayelekile.
Uma ukugeleza komfula nokwehla komfula kungafinyeleli ku-1.0 L / min, isihlungi se-HEPA semodyuli ye-photometer sidinga ukushintshwa. Imvamisa yahlulelwa ngokubheka inani lengcindezi ukuthola ukuthi ngabe idinga ukubuyiselwa futhi inakekelwe (ibanga lengcindezi: ingcindezi yesampula> 5KPa, umfutho owenyukayo nowaphansi> 8Kpa).
Yini okufanele ngiyenze uma ukuhlinzekwa kwe-aerosol ephezulu ye-ZR-1006 mask particulate filter filter kanye ne-airflow resistance tester kungenakufinyelela inani elihlosiwe?
Ngokuyinhloko kungenxa yokuthi ithuluzi lidinga ukuhlanzwa nokunakekelwa. Le nkinga ingaxazululwa ngokuhlanza umlomo wombhobho we-aerosol generator, ipayipi, ikamelo lokuxuba, ifeni nemodyuli ye-photometer.
Bese uhlola ukuthi isisombululo sikasawoti silungile yini, noma ngabe i-valve yokukhipha ekugcineni kwengilazi yebhodlela kukhiqizi we-aerosol generator iyavalwa. Futhi uhlole ukuthi ngabe zonke izingcindezi zivamile (Usawoti yi-0.24 MPa, u-oyela yi-0.05-0.5 MPa).
Ngabe isikhathi sokuhlola se-ZR-1201 mask resistance tester singasethwa sibe mfushane?
Izinga alicacisi isikhathi sokuhlolwa. Lokhu kuzokwenziwa ngemuva kokugeleza kwensimbi kuzinzile (cishe kumasekhondi ayi-15). Kunconywa ukuthi ubude besilinganiso bube bude kunamasekhondi ayi-15.
Ungabhekana kanjani nokuphambuka kwe-ZR-1201 mask tester tester?
Ukuqhathanisa, kunconywa ukusebenzisa amasampuli ajwayelekile (njengamasampuli ahlolwe yinhlangano egunyaziwe). Lapho wenza ukuqhathanisa, isampula elifanayo kufanele lihlolwe endaweni efanayo futhi amasampula kufanele afakwe kusengaphambili ngendlela efanayo. Uma usola ukuthi kunamaphutha kuthuluzi, kunconywa ukuthi uye kunhlangano yokulinganisa efanelekayo ukuze ulinganiswe.